Ukuncuma kwe-App - Iflethi okanye indlu ekwicomplex Gord - I-Airbnb
Ukuncuma kwe-App - Iflethi okanye indlu ekwicomplex Gord
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex zikwidolophu entle yaseGrožnjan, ekumgama weekhilomitha eziyi-15 ukusuka eNovigrad okanye ikumgama weekhilomitha eziyi-20 ukusuka e Umag.
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex zibekwe kwindlu yosapho ibe zineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-3 kumgangatho wesibini.. Iindwendwe zinegadi elahlekileyo kunye nendawo ephandle enophahla lwendawo yokutyela.
Abakhweli beebhayisekile balahlwayo xa begcina iibhayisekile zabo ebusuku.
Le flethi ine-WiFi yasimahla, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye ne-satellite TV. Inegumbi lokulala elineebhedi ezilala umntu omnye eziyi-3 nekhitshi elinendawo yokutyela (ehlala abantu abayi-2) kwindawo enye. Iflethi inamagumbi okuhlambela abucala aneshawa.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ikumgangatho wesibini kwaye inetreyini enefenitshala nendawo yokungena kwigadi enkulu enendawo yokuhlala/yokutyela.
I-Grožnjan ingentla kwentlambo i-Mirna River kwinduli engasentla kolwandle yeemitha eziyi-228.
I-Grožnjan yaziwa ngokuba "yidolophu yamagcisa" egcwele ubugcisa, iigalari kunye neekonsathi. Ime kwiintaba ezisentshona ye-Istra, kufutshane neBrtonigla neNovigrad, ikude ngeekhilomitha eziyi-15 kuphela ukusuka elwandle.
Esona sikhululo seenqwelo-moya sikufutshane yiPula Airport, ekwiikhilomitha eziyi-85 ukusuka kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex.
I-Aquapark Istralandia ikwiikhilomitha eziyi-18 kuphela kwaye umqolomba waseBaredine ukwiikhilomitha eziyi-24 kuphela ukusuka kwindawo yokuhlala.
Ulwandle olukufutshane lukwiikhilomitha eziyi-15 kuphela.
Izixeko ezinkulu ekuhlaleni zikumgama weekhilomitha eziyi-82 nePula.
Umsitho othandwayo weJazz kunye nesikolo se-jazz kwi-International Music Kaen Centre unokufunyanwa eGrožnjan.
Ngokomzekelo, umzobo we-tempore Grožnjan kunye neegalari ezininzi apho amagcisa abonisa khona imisebenzi yawo.
Ndifumaneka xa iindwendwe zifuna uncedo lwam.